याङवरक « Mechipost.com
नेत्र कोइराला, थर्पु पाँचथरको याङवरक गाउँपालिकाको आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० बजेट रु. ४८ करोड ९० लाख हुने भएको छ । संघीय तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त
याङवरक गाउँ कार्यपालिकामा एमालेका उम्मेदवार विजयी
फिदिम । याङवरक गाउँ कार्यपालिकाको निर्वाचनमा नेकपा (एमाले)का उम्मेदवार विजयी भएका छन् । चार जना महिला कार्यपालिका सदस्यका लागि भएको निर्वाचनमा एमालेका उम्मेदवारहरु समान १८ मत प्राप्त गर्दै विजयी भएका
नेत्रप्रसाद कोइराला थर्पु, १२ चैत । याङवरक गाउँपालिका वडा नं. ५ ऐसेलुटारमा स्थापना भएको चिज उत्पादन केन्द्रको आज उद्घाटन भएको छ । याङवरक गाउँपालिका र वडा नं. ५ को कूल
नेत्रप्रसाद कोइराला, थर्पु पाँचथरको याङवरक गाउँपालिका स्थित निशान कालिकाधाम र याङवरक पोखरी संरक्षण आयोजनाको शिलान्यास भएको छ । याङवरक–४ स्थित धार्मिक एवं ऐतिहासिक क्षेत्रलाई पर्यटकीय गन्तब्य निर्माणका लागि आवश्यक पूर्वाधार
पाँचथर, ११ पुस भारतसँग सीमा जोडिएका जिल्लाका उच्च पहाडी क्षेत्रहरुमा हिमपात भएको छ । केही दिनअघि हलुका वर्षा भएपछि शुक्रवार साँझबाट जिल्लाको याङवरक र फालेलुङ गाउँपालिमा पर्ने उच्च पहाडी क्षेत्रहरुमा
फिदिम, २६ कात्तिक । नेकपा (एमाले)को पाँचथरको याङवरक गाउँपालिकामा सन्तप्रसाद बेघाको अध्यक्षतामा ५१ सदस्यीय गाउँपालिका कमिटी निर्वाचित भएको छ । हिँजो सुरुआत भई आज विहान सम्पन्न गाउँपालिका अधिवेशनबाट सहमतिमा नयाँ
फिदिम, ८ कात्तिक । अकबरे खुर्सानी खेतीको पकेट कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने भएपछि याङवरक गाउँपालिका–३ ओयामका शैमेन्द्र सेलिङ सहित तीन युवाले गत जेठमा लहलह भएको मकैका बोट काट्न थाल्नुभयो । १३
नेत्रप्रसाद कोइराला, थर्पु । अन्यत्र जस्तै याङवरक गाउँपालिकालाई समेत कोभिड–१९ को दोश्रो लहरले प्रभावित गरेको छ । दोश्रो लहरको सुरुआतमै याङवरकमा एक दर्जन बढी सङ्क्रमित फेला परेपछि गाउँपालिकाले सम्पूर्ण ध्यान